Hay'adaha INXA, COGWO iyo JOINT oo kulan ay kaga hadlayaan shirka Kenya ku qabtay hotel The PanAfrican
Waxaa caawa ka dhacay hotel the PanAfrican oo ku yaalla magaalada Nairobi shir ay soo qabanqaabiyeen hay'adaha INXA, COGWO iyo JOINT. Shirkaas waxaa isugu yimid dad ka kala socda siyaasiyiin, ganacsato, waxgarad, odoyaal iyo aqoonyahanno.
Shirkan waxaa looga hadlay talo soo jeedin (proposal) ay diyaariyeen hay'adahaasi, kaas oo kula talinayey Guddiga farsamada shirka Kenya inay dedejiyaan nidaam dowladeed oo laga dhiso Soomaaliya.
Qoraalka ay soo saareen hay'aduhu waxaa kale oo uu ku talinayey qabanqaabiyaasha shirka in Golaha Baarlamaanka ee la habeynayo uu noqdo 450. Talooyinkaas waxaa ka muuqday in hay'adahaasi ay hamuun badan u qabaan inay shirka door cad ku yeeshaan.
Xiriiriyaha hay'adda INXA, Avv. Cumar Maxamed Cabdulle (Dhegey) ayaa sharraxaad kooban ka siiyey ka soo qayb galayaasha shirka qodobbada ku qoran qoraalka talo soo jeedintooda oo ku dhowaad 10 bog ka koobnaa.
Cumar Dhegey waxa uu sheegay inaysan ka soo horjeedin in hoggaamiyeyaasha kooxuhu ay shirka ka soo qayb galaan, hase ahaatee aaraada qaar ka mid ah dadkii shirka ka hadlay ayaa muujiyey inaysan ku qanacsanayn ka soo qayb galka hoggaamiyeyaasha kooxaha.
Qaar kale oo ka mid ahaa aqoonyahannadii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay ayaa sheegay in hirgelinta iyo fulinta shirka Kenya ay ku xiran tahay hoggaamiyeyaasha kooxaha.
Saciid Siyaad Shirwac oo ah ganacsade Nairobi deggan ayaa u sheegay ka soo qayb galayaasha in dadka qaar ay hoggaamiyeyaasha kooxuhu u yihiin madaxdooda sharciga ah, qaar kalena ay arrintaas diiddan yihiin.
Haween ka soo qayb galay shirka ayaa iyaguna sheegay in haweenka Soomaaliyeed ay jecel yihiin inay kaalin ku yeeshaan shirka, iyagoo ku eedeeyey ragga inay wax walba iyagu qaateen.
Xuseen Dhimbil Warsame ayaa isagu sheegay in talo soo jeedinta hay'adaha ee ku wajahan shirka Kenya ay qodobbo badan qaladaad ay ku jiraan, sida qodob aan qeexnayn oo sheegaya in dastuur cusub la sameeyo. "Halkee looga tagayaa kii Carta" ayuu yiri Xuseen Dhimbil.
Shirka ayaa ku soo gaba gaboobay iyadoo hay'adahaasi ay ballan qaadeen inay wax badan ka qaadan doonaan fekradihii ay u soo jeediyeen ka soo qayb galka shirkaas.
Doblamaasiyiin reer galbeed ah oo u waramayay saxaafada dalka Kenya ayaa GUJI..
�� Urur Islaami ah oo Booqday Soomaali Kuxiray Minnesota GUJI
�� Sharci liddi ku ah saxaafada Xorta ah oo kasoobaxay DKG GUJI
�� Qoxootiga Bantuga oo gudniinka ku boobsiinaya gabdhohooda GUJI
�� Kalfadhiga Islaamiga ee 5aad oo laguqabanayo Ottawa GUJI